समाजवादउन्मुख देशद्रोह !- विचार - कान्तिपुर समाचार
यस्तो विचार भएकाले वर्तमान स्थितिमा राज्यले सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने र सबैलाई निःशुल्क शिक्षा दिन आवश्यक पनि नरहेको कुरा सविधानमा पनि नलेख्न पटक–पटक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आग्रह गरिआएकै हुन् । –त्यति बेला यस्तो कुरा हाम्रा हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले सुन्छन् भन्ने अन्दाज नै रहेन !) सबैलाई थाहा छ, राम्रो भनिने सामुदायिक भनिने सबैजसो सरकारी विद्यालयमा अभिभावकले पैसा तिर्छन् । ऐनमा विद्यार्थीबाट शुल्कलिन पाइन्न भन्ने पाखण्डी प्रावधान थियो, अब फेरि कुनै बहानामा शुल्क लिन पाइन्न भन्ने अर्को पाखण्ड छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो पाखण्ड हटाउन साँच्चै मद्दत गरे भने धन्य नै हुनेछ ।
कति खासगरी केन्द्रीय पदाधिकारीहरू स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्दैनन्,शिक्षा झन् बिग्रन्छ भनेर सहयोग गर्नुको सट्टा अधिकारसीमित गर्न उद्यत देखिन्छन् । मन्त्रालयबाट पैसै बन्द गरिदियो भने मात्रै हो, अन्यथा शिक्षा यहाँभन्दा बिग्रने ठाउँ छैन । देशभरमै शिक्षा कित निजी तबरबाट चलेको छ, कि उत्साही शिक्षक, सहयोगी अभिभावक र समुदायबाटभएको छ । यी सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयका मित्रहरूको जागिर खाने मूल कामको प्रत्युत्पादनचाहिँ त्यस्ता विद्यालयलाई काम गर्न नरोक्नु र नियमित राज्यले दिने तहको रकम प्रवाह गरिरहनु नै हो ।
ओलीको बिहीबारको उद्घाटन भाषणप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कृषि अभियन्ता कृष्ण पौडेलले लेखे, ‘जग्गा दलाली र शिक्षाको व्यापार गर्नेहरू देशद्रोही हुन् ।’ उनको भनाइ सच्याउनुपर्‍यो, ‘समाजवाद उन्मुख देशका द्रोही हुन्’ । अनि हाम्रो देशमाचाहिँ संविधान वा अन्यत्र जहाँ–जहाँ लेखिए पनि समाजवादी मान्यता राख्दैन भन्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले त्यो ताकत पनि छ । यति धेरै शक्ति भएका बेलामा संविधान संशोधन गरिदिए भैगो ! निजी क्षेत्र, शिक्षकहरू, सांसद,सबै त्यसकै पक्षमा छन्— आखिर ती जुन–जुन दलमा भए पनि के भो र ?
लेखक शिक्षानीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् । प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४५